​Wasiir Soocade oo dil ugu hanjabay wariyaasha Puntland [Dhagayso]
GAROWE- Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Puntland Maxamud Xasan Soocade oo tan iyo markii uu xafiiska yimid hanjabaad iyo xarig kula kacayay wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgasha deegaanada Puntland, ayaa maanta ku dhaqaaqay tallaabo hor leh, wuxuuna ku goodiyay inuu dili doono ciddi waraysata Guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamada Maxamed Gallan.
Soocade oo lahadlayay Radio Daljir, ayaa tilmaamay inuusan ixtiraamayn dastuurka iyo qaanuunka warbaahinta dalka, balse taa badalkeeda u gacan qaadi doonaan wariyaasha isagoo adeegsana rasaas.
"Wallaahi, Billaahi, Tallaahi, waan soomanahay, inaanan sharci fulin doonin oo aan xeer eegi doonin, xabbad iyo dil waxaanan ahayn inaanan u hayn wariyaasha maanta kadib,"Ayuu yiri wasiir Soocadde.
Wuxuu xusay in lugaha iyo gacmaha ka jari doonaan wariyaasha islamarkaana aysan cidna wax u qaban doonin isagoo si gaar ah u magacaabay dalalka caalamka ee xuquuqda aadanaha difaaca.
"Wallaahi hadii gaal yimaado ama jinni yimaado ama hadii aad moodaysaan Eydaas xun xun ee aan shalay ka imid ee Ingiriis iyo Maraykan inay idin difaacayaan Lugahiina iyo Gacmahiina ha kuwaayina....Walaa Dastuur ayaanan aqoon, walaa xeer ayaanan aqoon, walaa wax kalaanan aqoon, Xabbad ayaan haysanaa hadaad afka nalasoo gashaan Indhaha iyo Wadnaha ayaan idiin kasoo saaraynaa,"Sidaasi waxaa wasiirka warfaafinta Puntland.
Wasiir Soocadde oo sii hadlay ayaa yiri,"Sharci darro iyo xoog ayaan idin kuwadaynaa waayo idinkaa xishoon wayay oo sharcigii dhaafay".
Hadalkan ayaa soo yeeray maalin uun kadib markii wasiir Soocade, uu soo saaray waraaq loogu hanjabayo warbaahinta taasoo lagu farayay inaysan waraysi, sawir iyo qoraalba ka samayn shakhsiyaad uu ku sifeeyay argagixiso, waxaana xusid mudan in qoraalkaasi lagu muujin cidda sida tooska ah loola hadlayo iyo qodobka loo adeegsaday ee dastuurka ama xeerka warbaahinta kamid ah. Waxaana arrintaasi si aad ah u cambaareeyay wariyaasha ka howlgala deegaanada Puntland kuwaas oo sheegay in wasiirku si khaldan u isticmaalayo awooddiisa.
Garowe: ​Idaacadda Daljir oo la xiray
Puntland 23.06.2016. 18:52
GAROWE- Waxaa goordhaweyd Albaabada loo laabay Idaacadda Daljir xarunteeda magaalada Garowe, kadib amar la sheegay inuu kasoo baxay dowladda Puntland.
Tallaabada lagu xiray xaruntan, ayaa waxaa loo aaneynayaa waraysi ay kaqaaday Guddoomiyihii hore gobolka Bari ...
​Wasiirka warfaafinta Puntland oo saxaafada digniin u direy [Qoraal]
Puntland 22.06.2016. 20:28
Cabdisamad Gallan oo waraysi bixiyay [Dhagayso]
Puntland 27.06.2016. 22:43
​Hishiis hordhac ah oo laga gaaray arrinta Gallan [Dhagayso]
Puntland 25.06.2016. 16:11
​Ciidamada Puntland iyo kuwa Gallan oo isku dhacay
Puntland 23.06.2016. 15:11
​Gallan "Hubka iyo agabka aan haysanno waxaan ka helnaa xukuumadda Cabdiwali"
Puntland 21.06.2016. 17:46
​Wariyaasha Puntland oo loo tababarayo tabinta doorashada Somalia
Puntland 17.07.2016. 12:43